DeltaFosB သည်နျူကလိယ၏တိုက်ရိုက်နှင့်သွယ်ဝိုက်လမ်းကြောင်းလုပ်ဆောင်မှုကိုကွဲပြားခြားနားစွာပြုပြင်သည် (၂၀၁၃) - သင့် ဦး နှောက်သည် Porn တွင်
proc Natl Acad သိပ္ပံအမေရိကန်အေ 2013 ဇန်နဝါရီ 29; 110 (5): 1923-8 ။ Doi: 10.1073 / pnas.1221742110 ။
Grueter BA ဘွဲ့, Robison AJ, Neve RL, Nestler EJ, Malenka RC.
နန်စီ Pritzker ဓာတ်ခွဲခန်း, စိတ်ရောဂါကုသမှုနှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာသိပ္ပံဌာန, ဆေးပညာ၏စတန်းဖို့ဒ်တက္ကသိုလ်ကျောင်း, Palo Alto, CA 94305, USA ။
နျူကလိယ accumbens အတွက် Synaptic ပြုပြင်မွမ်းမံ (NAc) အလတ်စား spiny အာရုံခံ (MSNs) မူးယစ်ဆေးစွဲများတွင်ပါဝင်ပတ်သက် maladaptive တုံ့ပြန်မှုအပါအဝင် adapter နဲ့ရောဂါဗေဒဆုလာဘ်-မှီခိုသင်ယူမှုအတွက်သော့ချက်အခန်းကဏ္ဍ. NAc MSNs နှစ်ခုအပြိုင်ဆားကစ်, ကွဲပြားအပြုအမူလုပ်ဆောင်ချက်များကို subserve ကြောင်းတိုက်ရိုက်နှင့်သွယ်ဝိုက်လမ်းကြောင်းတွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်။ NAc MSN ကို synapses ၏ပြုပြင်မွမ်းမံတဲ့ဆဲလ်အမျိုးအစား-တိကျတဲ့ထုံးစံ၌အချို့မျိုးဗီဇ၏မှတ်တမ်းအလားအလာပြောင်းလဲမှုများမှတဆင့်အစိတ်အပိုင်းအတွက်ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ အဆိုပါကူးယူအချက် [increment] FosB အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ NAc အတွက်မျိုးဗီဇစကားရပ်အပြောင်းအလဲများအတွက်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရသော့ချက်ပရိုတိန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်, သေး NAc MSNs အတွက် Synaptic function ကိုအပေါ်သက်ရောက်မှုကိုမသိရှိပါ။ ဤတွင်ကျနော်တို့ DeltaFosB ၏ overexpression excitatory Synaptic အစွမ်းသတ္တိကိုလျော့ကျခြင်းနှင့်ဖွယ်ရှိ NAc shell ကိုနှင့် core ကိုနှစ်ဦးစလုံးအတွက် D1 dopamine အဲဒီ receptor-ဖော်ပြတိုက်ရိုက်လမ်းကြောင်း MSNs ပေါ်သို့အသံတိတ် synapses တိုးပွားလာကြောင်းဆန္ဒပြခဲ့ကြသည်။
ဆနျ့ကငျြ, deltaFosB ဖွယ်ရှိ core ကို, D2 dopamine အဲဒီ receptor-ဖော်ပြသွယ်ဝိုက်လမ်းကြောင်း MSNs NAc shell ကိုပေါ်သို့အသံတိတ် synapses လျော့နည်းသွားပေမယ့်မရ။ NAc MSN ကို dendritic ကျောရိုး shape သုက်ပိုးပုံသဏ္ဌာန်၏ analysis [increment] FosB တိုက်ရိုက် D1 အတွက်နုကျောရိုး၏သိပ်သည်းဆတိုးမြှင့်ပေမယ့်သွယ်ဝိုက်လမ်းကြောင်း MSNs D2 မထင်ရှား။ ကျနော်တို့ရွေးချယ် overexpressed [increment] FosB ၏ဆဲလ်အမျိုးအစား-တိကျတဲ့လုပ်ရပ်တွေကို၏အမူအကျင့်အကျိုးဆက်များကိုဆုံးဖြတ်ရန် [increment] FosB D1 အတွက် NAc အတွက်တိုက်ရိုက်သို့မဟုတ် D2 သွယ်ဝိုက် MSNs Vivo နှင့်တိုက်ရိုက် (သို့သော်သွယ်ဝိုက်မဟုတ်) လမ်းကြောင်း MSN ကိုစကားရပ်အပြုအမူတုံ့ပြန်မှုပိုကောင်းစေပါတယ်တွေ့ရှိခဲ့ရန် ကိုကင်းရန်။ ဤရလဒ်သည် NAc အတွက် [increment] FosB differential တစ်ဆဲလ် type- နှင့်မဟာမဲခေါင်ဒေသတွင်း-တိကျတဲ့ဖက်ရှင်အတွက် Synaptic ဂုဏ်သတ္တိများနှင့်ဆုလာဘ်-related အပြုအမူတွေ modulates ကြောင်းထုတ်ဖေါ်။
Δ၏ဆဲလ်အမျိုးအစား-တိကျတဲ့လုပ်ရပ်များ၏အမူအကျင့်အကျိုးဆက်များကိုဆုံးဖြတ်ရန်FosBကျနော်တို့ရွေးချယ်Δ overexpressedFosB D1 အတွက် တိုက်ရိုက် သို့မဟုတ် D2 သွယ်ဝိုက် Vivo အတွက် NAc အတွက် MSNs နှင့်တွေ့ရှိခဲ့ တိုက်ရိုက် (သို့သော်မရ သွယ်ဝိုက်) လမ်းကြောင်း MSN ကိုစကားရပ်ကိုကင်းရန်အမူအကျင့်တုံ့ပြန်မှုပိုကောင်းစေပါတယ်။ ဤရလဒ်သည်ကြောင်းΔထုတ်ဖေါ်FosB NAc အတွက် differential module type- နှင့်မဟာမဲခေါင်ဒေသတွင်း-တိကျတဲ့ဖက်ရှင်တစ်ဦးကလာပ်စည်းများတွင် Synaptic ဂုဏ်သတ္တိများနှင့်ဆုလာဘ်-related အပြုအမူတွေ။
အဆိုပါနျူကလိယ accumbens (NAc) ဂိုးညွှန်ကြားအပြုအမူထိန်းညှိ၏ရည်ရွယ်ချက်အဘို့စိတ်ခွန်အားနိုးသတင်းအချက်အလက်ပေါင်းစပ်များအတွက် key ကိုအလွှာဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ NAc အတွင်းဆဲလ်ထက်ပို 90% နှစ်ခုအဓိက subpopulations သို့ခွဲခြားနိုင်သည့်အလတ်စား spiny အာရုံခံ (MSNs), ဖြစ်ကြသည်။ သွယ်ဝိုက်လမ်းကြောင်း MSNs, အရာအများစုအမြန် D1 receptors (D1 MSNs), အများအားဖြင့် ventral pallidum ဖို့စီမံကိန်းအတွက်သော်လည်းတိုက်ရိုက်လမ်းကြောင်း MSNs, အရာအများစုအမြန် D2 dopamine receptors (D2 MSNs), အဓိကအား midbrain dopamine ဖို့စီမံကိန်းကို (DA) အရေးပါ, အားဖြင့်သွယ်ဝိုက်လွှမ်းမိုး DA အာရုံခံ (1, 2). NAc MSNs များ၏လှုပ်ရှားမှုဟာ prefrontal cortex, hippocampus နှင့် amygdala ကနေ excitatory သွင်းအားစုများကအထူးသဖြင့်မောင်းနှင်နေသည်။ ဒါဟာအလှည့်ထဲမှာစွဲနှင့်ဆက်စပ်ကြာရှည်အပြုအမူအလိုက်သင့်ပြောင်းလဲနေထိုင်ဖျန်ဖြေရာ, ထိုကဲ့သို့သောအလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများမှထိတွေ့မှုအဖြစ်အမူအကျင့်အတွေ့အကြုံများအားဖြင့်သွေးဆောင် NAc excitatory synapses မှာရောဂါဗေဒလှုပ်ရှားမှု NAc MSNs အပေါ်မှတ်တမ်းစက်ယန္တရားများနှင့် synapses နှစ်ဦးစလုံး၏တစ်ဦးပြန်လည်ဖွဲ့စည်း induces ကြောင်းအကြံပြုထားသည် (1-3).
မကြာမီကလေ့လာမှုများ (D1 MSNs နှင့် D2 MSNs NAc ၏အဓိကမဟာမဲခေါင်ဒေသတွင်းအတွက်ကွဲပြားခြားနားသော electrophysiological နှင့် Synaptic ဂုဏ်သတ္တိများပြကြောင်းသရုပ်ပြပါပြီ4) နှင့် MSNs ၏နှစ်ခု Subtype စွဲ-related အပြုအမူအတွက်ကွဲပြားအခန်းကဏ္ဍ play ကြောင်း (5) ။ သို့သော်ဤကွဲပြားခြားနားမှုအခြေခံမော်လီကျူးယန္တရားများညံ့ဖျင်းနားလည်သဘောပေါက်နေကြဆဲဖြစ်သည်။ ပြီးခဲ့သည့်ဆယ်စုနှစ်နှစ်ခုကျော်, တိုးမြှင့်သက်သေအထောက်အထား addictive- နှင့်စိတ်ကျရောဂါကဲ့သို့သောအပြုအမူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဦးနှောက်ရဲ့ဆုလာဘ် circuitry ပြောင်းလဲမှုများမှ NAc အတွက်ΔFosBတစ် Fos မိသားစုကူးယူအချက်၏ induction နှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည် (3) ။ ΔFosBသည်တစ်ဦးအထူးသဖြင့်တည်ငြိမ်ထုတ်ကုန် FosB မျိုးဗီဇ (6), ကူးယူထိန်းညှိရန်မျိုးဗီဇမြှင့အတွင်းက AP-1 က်ဘ်ဆိုက်များမှခညျြနှောငျကြောင်း Active ပရိုတိန်း-1 (AP-1) ရှုပ်ထွေးသောဖွဲ့စည်းရန်ဇွန်မိသားစုပရိုတိန်းနှင့်အတူ heterodimerizes ။ အများအပြား Fos မိသားစုပရိုတိန်းယာယီစူးရှသောမူးယစ်ဆေးထိတွေ့မှုအားဖြင့်သွေးဆောင်နေကြပေမယ့်များ၏နာတာရှည်အုပ်ချုပ်ရေးနီးပါးအလွဲသုံးစားမှုမဆိုမူးယစ်ဆေး (ထို NAc အတွက်ΔFosB၏ကြာရှည်စုဆောင်းခြင်း induces6). ဒီစုဆောင်းခြင်း၏အလုပ်လုပ်တဲ့အရေးပါမှုနှင့်အတူတသမတ်တည်း, ရေရှည်ရွေးချယ်သည့် NAc ၏ D1 MSNs အတွက်ΔFosB၏ overexpression နှင့်သွေးဆောင် bitransgenic ကြွက်အကြောင်းတရားများ၏ dorsal striatum ကင်းဖို့ locomotor တုံ့ပြန်မှုတိုးလာ (7), ကိုကင်းနှင့်အမော်ဖင်းအကိုက်နှစ်ဦးစလုံးမှအခွအေနေအရပျကို preference ကိုတိုးမြှင့် (7, 8), နှင့်မြှင့်တင်ရန်ကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေး (9).
စွဲ phenotypes အခြေခံအဆိုပါအာရုံကြော maladaptations သို့သော်အလွဲသုံးစားမှုသို့မဟုတ်ထိုကဲ့သို့သောစိတ်ဖိစီးမှုကဲ့သို့သောအခြားလှုံ့ဆော်မှု၏မူးယစ်ဆေးမှကနဦးထိတွေ့မှုအပေါ်ချက်ချင်းစတင်နိုင်ပါသည်။ ဒီအယူအဆ၏ထောက်ခံမှုမှာတော့အကြောင်းတရားများအလေးပေးရန်ပင်အကျဉ်း preexposure (မူးယစ်ဆည်းပူးနေ (လက်ဝါးကပ်တိုင်-sensitive) အတွက် propensity တိုးလာ10-12) နှင့်အပြန်အလှန် (13) ။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, (ဤအာရုံခံ၏ Synaptic ဂုဏ်သတ္တိများအပေါ်စိတ်ဖိစီးမှုနဲ့ကိုကင်းများ၏သက်ရောက်မှုကိုလေ့လာခဲ့ကြပေမယ့်1-3, 14-16), MSN ကို Synaptic ဂုဏ်သတ္တိများအပေါ်ΔFosB၏သက်ရောက်မှုများအတွက်တိုက်ရိုက်သက်သေအထောက်အထားတွေချို့တဲ့နေပါတယ်။ ΔFosB overexpression NAc dendritic ကျောရိုး shape သုက်ပိုးပုံသဏ္ဌာန်ပွောငျးလဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ Synaptic function ကို၏ FosB စည်းမျဉ်း (အထူးသဖြင့်အကျိုးစီးပွားဖြစ်ပါတယ်17, 18), နှင့်မကြာသေးမီအလုပ် (အခြားမှတ်တမ်းအားပြိုင်မှု NAc MSN ကိုဇီဝြဖစ်စဉ်ကိုသြဇာလွှမ်းမိုးနိုင်သည်ကိုညွှန်ပြ19) နှင့် Synaptic ဖွဲ့စည်းပုံမှာ (20).
တိုက်ရိုက်နဲ့သွယ်ဝိုက်လမ်းကြောင်း NAc MSNs အတွက်ΔFosBစကားရပ်၏တိုတောင်း-သက်တမ်း Synaptic သက်ရောက်မှုဆန်းစစ်ဖို့ကျနော်တို့ဘက်တီးရီးယားအတုခရိုမိုဆုန်း (BAC) ရွေးချယ် D1 MSNs နှင့်ရွေးချယ်သောဤ MSN ကို subpopulations ပစ်မှတ်ထားကြောင်းဗိုင်းရပ်စ် virus သယ်ဆောင်တံဆိပ်ကပ်ကြောင်း Transgene ကြွက်တွေကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ MSNs ထံမှပစ်မှတ်ထားအသံသွင်း၏ဆဲလ် type- နှင့်ဒေသ-တိကျတဲ့သက်ရောက်မှုသပိတ်မှောက်ထင်ရှား NAc MSNs ပေါ်သို့ excitatory synapses ၏ဂုဏ်သတ္တိများအပေါ် FosB overexpression ။ ၏ expression အဆိုပါ NAc အတွက် FosB ကိုလည်းဆဲလ်အမျိုးအစား-တိကျတဲ့ထုံးစံ၌ dendritic ကျောရိုး shape သုက်ပိုးပုံသဏ္ဌာန်နှင့်အစွဲ-related အပြုအမူတွေကိုပြုပြင်မွမ်းမံ။ ဤရလဒ်သည်၏စည်းမျဉ်းကြောင်းနောက်ထပ်သက်သေသာဓကများကို အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများအားဖြင့် FosB အဆင့်ဆင့်အရေးကြီးစွဲ-related အပြုအမူတွေကိုအခြေခံရှုပ်ထွေး circuit ကိုလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်အထောက်အကူပြုသော NAc အတွက်ဆဲလ်အမျိုးအစား-တိကျတဲ့အပြောင်းအလဲဖြစ်ပေါ်စေသည်။
FosB NAc MSNs အတွက် Presynaptic ရာထူးအမည်မထိခိုက်ပါဘူး။
၏ Synaptic သက်ရောက်မှုဆန်းစစ်ရန် NAc MSNs အတွက် FosB overexpression ကျနော်တို့ stereotaxically တစ် herpes simplex virus ကို (HSV) ဖော်ပြထိုးသွင်း FosB (tdTomato စကားရပ် D8 dopamine အဲဒီ receptor ကမကထခြင်းဖြင့်မောင်းနှင်ခဲ့သည့်အတွက် 10-wk အရွယ်အထီး BAC Transgene ကြွက်မှ 1- ၏ NAc သို့ EGFP မှ fused21) ။4မှသုံးနောက်ပိုင်းမှာကျနော်တို့ (အသီးသီး D1 MSNs နှင့် D2 MSNs defining tdTomato ၏ရှေ့မှောက်တွင်သို့မဟုတ်မရှိခြင်းနှင့်အတူ NAc shell ကိုနှင့်အဓိက MSNs ကနေတပြင်လုံးကို-ဆဲလ် patch ကို-ညှပ်အသံသွင်းလုပ် d4), နှင့်ရသော EGFP စကားရပ် defining ဆဲလ် FosB ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့သည်။ ကရွေးချယ်ကြွက်များတွင်ဗိုင်းရပ်စ်များနှင့်အတူ NAc core နဲ့ shell ကိုပစ်မှတ်ထားဖို့မဖြစ်နိုင်ပါဖြစ်သော်လည်းကြောင့် (ဖြစ်သောကြောင့် reward- နှင့်စွဲ-related အပြုအမူတွေသူတို့ရဲ့စည်းမျဉ်းထဲမှာလူသိများကွဲပြားခြားနားမှုဤဦးနှောက်ဒေသများခွဲခြားရန်အရေးကြီးပါသည်ခဲ့သည်2, 3) ။ နှစျဦးစံ electrophysiology assay ကြောင်းထင်ရှား FosB overexpression detect ဆန်းစစ်သည့် NAc MSN ကို subpopulations မဆိုအတွက် presynaptic function ကိုသြဇာလွှမ်းမိုးခြင်းမရှိပေ။ အထူးသငါးခုကွဲပြားခြားနားသော interstimulus ကြားကာလ, transmitter ကိုလွှတ်ပေးရန်ဖြစ်နိုင်ခြေတစ်ဦးစံအတိုင်းအတာမှာ excitatory postsynaptic ရေစီးကြောင်း (EPSCs) ၏တွဲ-သွေးခုန်နှုန်းအချိုး (PPRs), နေဖြင့်ထိခိုက်ခဲ့ကြ အဆိုပါ NAc shell ကိုသို့မဟုတ် core ကိုဖြစ်စေများတွင် FosB overexpression (သင်္ဘောသဖန်း။ S1) ။ ထို့ပြင်လည်း presynaptic function ကိုနှင့်ဆက်နွယ်နေပါသည်ရာသေးသေးလေး EPSCs (mEPSCs) ၏ပျှမ်းမျှအကြိမ်ရေ, အားဖြင့်ထိခိုက်ခဲ့ အဆိုပါ NAc shell ကိုနှင့် core ကိုနှစ်ဦးစလုံးအတွက် D1 နှင့် D2 MSNs အတွက် FosB overexpression (သင်္ဘောသဖန်း။ S1).
effects များ NAc D1 MSNs အတွက် Excitatory Postsynaptic Properties ကိုအပေါ် FosB ။
တိုတောင်း-အသုံးအနှုန်းများ၏သက်ရောက်မှုဆန်းစစ်ရန် NAc shell ကိုနှင့်အဓိက MSNs အတွက် excitatory synapses ၏ postsynaptic ဂုဏ်သတ္တိများအပေါ် FosB overexpression ကျနော်တို့ AMPA အဲဒီ receptor (AMPAR) ၏အချိုးအစားတိုင်းတာ - NMDA အဲဒီ receptor မှ (NMDAR) (EPSCs -mediated22) ။ shell ကိုနှင့် core ကိုငျဒသေနှစ်ဦးစလုံးအတွက်, AMPAR / NMDAR အချိုး overexpressing D1 MSNs အတွက်သိသိသာသာသေးငယ်ခဲ့ကြ အိမ်နီးချင်း Virus ကူးစက်ထားခြင်းမရှိတဲ့ D1 MSNs (ရန် FosB ဆွေမျိုးသဖန်းသီး။ 1 A နှင့် B) ။ AMPAR-mediated mEPSCs ၏ပျမ်းမျှ amplitude ကိုလည်းသိသိသာသာလျော့နည်းသွားခဲ့ကြသည်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ AMPAR / NMDAR အချိုး၌ဤကျဆင်းခြင်းအနည်းဆုံးတစ်စိတ်တစ်ဒေသအတွက် AMPAR-mediated Synaptic ဂီယာအတွက်လျော့နည်းရန်, ကြောင့်ခဲ့ FosB overexpression (သဖန်းသီး။ 1 C နှင့် D) ။ GluA2-မချို့တဲ့ဘဲစေ့စပ်အတွင်း၌ rectifying AMPARs အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်နာတာရှည်စိတ်ဖိစီးမှု protocols များ (၏ Self-အုပ်ချုပ်မှုကနေဆုတ်ခွာအောက်ပါ NAc MSN ကို synapses သို့ထည့်သွင်းထားပါသည်သောကြောင့်14, 15, 23), ကျနော်တို့လာမယ့် (လက်ရှိ-ဗို့အားဆန်းစစ်IVရှိမရှိဆုံးဖြတ်ရန် pharmacologically အထီးကျန် AMPAR EPSCs ၏) ကြားဆက်ဆံရေး FosB overexpression Synaptic AMPARs ၏ stoichiometry သြဇာလွှမ်းမိုးမှု။ AMPAR EPSC IV နှစ်ဦးစလုံးထိန်းချုပ်မှုကနေမှတ်တမ်းတင်ထားသောခါးဆစ်နဲ့ အဆိုပါ NAc shell ကိုနှင့်အမာခံအတွက် D1 MSNs FosB-ဖော်ပြ (linear တို့အနည်းငယ်မျှသာအတွင်းချက်ကိုပြင်ဆင်ခြင်းပြသဖန်းသီး။ 1 E နှင့် F) ။ ထို့ကြောင့်, FosB overexpression NAc D2 MSN ကို synapses သို့ GluA1-ချို့တဲ့ AMPARs ၏ဆွဲသွင်းပါဝင်မှုမထားဘူး။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ NMDAR stoichiometry ကြောင့်ထိခိုက်ခံခဲ့ရခြင်းရှိမရှိဆုံးဖြတ်ရန် FosB overexpression ကျနော်တို့ GluN2B subunits ၏ရှေ့မှောက်တွင်အားဖြင့်ရွေ့ရသော NMDAR EPSC ယိုယွင်းအချိန်သင်တန်းများ, တိုင်းတာ။ FosB စကားရပ်ကို (NAc shell ကိုအတွက် D1 MSNs အတွက်ဝက်အထွတ်အထိပ်တစ်သိသိသာသာ သာ. ကြီးမြတ်အချိန်စေသောသဖန်းသီး။ 1 G1 နှင့် G2) နှင့်အလားတူလမ်းကြောင်းသစ်ကို (NAc core ကိုလေ့လာခဲ့သည်သဖန်းသီး။ 1 H1 နှင့် H2) ။ ဤရလဒ်သည် (NAc အတွက်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတက်ကြွ CREB ၏ဟူသောအသုံးအနှုနျးကိုအလားတူအကြံပြု24), FosB overexpression NAc D2 MSN ကို synapses မှာ GluN1B ပါဝင်သော NMDARs ၏အချိုးအစားတစ်ခုတိုး elicits ။
၏ Overexpression NAc အတွက် FosB shell ကိုနှင့်အမာခံအတွက် D1 MSN ကို Synaptic အစှမျးသတ်တိကိုအထူးပြု။ (A) ကိုယ်စားလှယ် EPSCs (A1) တစ်ဦး NAc shell ကို D70 ထိန်းချုပ်မှု (အနက်ရောင်) မှ -40 နှင့် + 1 MV မှာမှတျတမျးတငျထားတဲ့နှင့် FosB (+) (အနီ), MSN နှင့်အကျဉ်းချုပ်ဂရပ် (A2) ၏ ...
effects များ NAc D2 MSNs အတွက် Excitatory Postsynaptic Properties ကိုအပေါ် FosB ။
, D1 NAc MSNs မတူဘဲ D2 MSNs အတွက် FosB overexpression (ထို NAc shell ကိုအတွက် AMPAR / NMDAR အချိုးတစ်ခုတိုးရူးနှမ်းသဖန်းသီး။ 2A), ဒါပေမယ့် NAc core ကိုအံဩစရာကောင်းလောက်အောင်မျှရှာဖွေ ထောက်လှမ်း. အကျိုးသက်ရောက်မှု (သဖန်းသီး။ 2B) ။ ထို့အပြင်အခြား Synaptic assay အဘယ်သူအားမျှ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများထုတ်ဖော်ပြသ NAc D2 MSNs အတွက် FosB overexpresson ။ AMPAR-mediated mEPSC amplitude (သဖန်းသီး။2C နှင့် D), AMPAR EPSC IV ခါးဆစ်နှင့်ချက်ကိုပြင်ဆင်ခြင်း Index (သဖန်းသီး။2E နှင့် F), အဖြစ်ကောင်းစွာ NMDAR EPSC ယိုယွင်းအချိန်သင်တန်းများအဖြစ်ကအားလုံးထိခိုက်ခဲ့ကြ NAc D2 MSNs အတွက် FosB overexpression ။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက်ကွောငျးတငျပွ FosB overexpression NAc D2 MSNs အပေါ် excitatory synapses ထက်အများကြီးငယျဆုံးသောအတိုင်းအတာအထိ NAc D1 MSNs အပေါ် excitatory synapses များ၏ဂုဏ်သတ္တိများကိုအထူးပြု။
၏ Overexpression NAc အတွက် FosB D2 MSN ကို Synaptic shell ကိုခှနျအားသော်လည်းမအဓိကပြုပြင်မှု။ (A) ကိုယ်စားလှယ် EPSCs (A1) တစ်ဦး NAc shell ကို D70 ထိန်းချုပ်မှု (အနက်ရောင်) မှ -40 နှင့် +2MV မှာမှတျတမျးတငျထားတဲ့နှင့် FosB (+) (အစိမ်းရောင်), MSN နှင့်အကျဉ်းချုပ်ဂရပ် ...
effects များ NAc D1 နှင့် D2 MSNs အတွက်အသံတိတ် synapses အပေါ် FosB ။
Postsynaptic အသံတိတ် synapses AMPARs ၏သိရှိနိုင်အဆင့်ဆင့်ပေမယ့်အလွယ်တကူရှာဖွေ ထောက်လှမ်း. NMDARs (နဲ့အတူ synapses များမှာ25-27) ။ သူတို့ကရေရှည်အလားအလာများအတွက်စံပြအလွှာ (LTP) ပေး (28) နှင့် hippocampal CA1 ပိရမစ်ကြီးဆဲလ်တွေအတွက်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတက်ကြွ CREB ၏စကားရပ်အားဖြင့်ထုတ်ပေးနိုင်ပါသည် (28) နှင့် NAc MSNs (24) ။ ၏လေ့လာ Synaptic ဆိုးကျိုးများအများအပြားကြောင့်, FosB overexpression ကျနော်တို့ NMDAR EPSCs မှ AMPAR EPSCs ဆွေမျိုးတစ် CV ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဖျော်ဖြေ, NAc MSNs အပေါ်အသံတိတ် synapses ၏အချိုးအစားပြောင်းလဲနေဖြင့်ရှင်းပြခဲ့နိုင်ပါသည်။ တစ်ခုတည်းဆဲလ်ထဲကနေအသံသွင်းခုနှစ်, 1 / CV ကို၏အချိုးအစား2 1 / CV ကိုမှ NMDAR EPSCs ၏2 AMPAR EPSCs ၏တိုက်ရိုက် (အသံတိတ် synapses ၏အချိုးအစားနှင့်ဆက်နွယ်နေပါသည်28, 29). FosB overexpression (ထို NAc shell ကိုနှင့်အမာခံအတွက် D1 MSNs ၌ဤအချိုးအတွက်သိသိသာသာတိုးစေသောသဖန်းသီး။3A နှင့် B) ။ ဆနျ့ကငျြ, ဒီအချိုးမပြောင်းလဲမှုကိုလေ့လာခဲ့သည် တစ်ဦးကျဆင်းခြင်း overexpressing NAc shell ကို D2 MSNs အတွက်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်သော်လည်း, NAc core ကို D2 MSNs FosB-ဖော်ပြ FosB (သဖန်းသီး။ 3C) ။ ဤရလဒ်သည်သောအယူအဆနှင့်ကိုက်ညီများမှာ FosB overexpression NAc shell ကိုနှင့်အဓိက D1 MSNs အပေါ်အသံတိတ် synapses ၏အချိုးအစားတစ်ခုတိုးခြင်းနှင့် NAc shell ကို D2 MSNs အပေါ် synapses တစ်ခု unsilencing ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
ΔFosBစကားရပ် D1 နှင့် D2 NAc MSNs ၌တိတ်ဆိတ်စွာနေ synapses ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအပေါ်ဆန့်ကျင်ဘက်သက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။ (Aက) ထိန်းချုပ်မှုကနေ AMPAR EPSCs (-70 MV) နှင့် NMDAR EPSC (+ 40 MV) amplitude ကွက် (A1) နှင့် FosB (+) (A2NAc shell ကိုအတွက်) D1 MSN ကို။ (B) အနှစ်ချုပ် ...
effects များ NAc MSN ကို Dendritic ကျောရိုးအပေါ် FosB ။
NAc MSNs အတွက်ကင်းအုပ်ချုပ်ရေးတစ်ဦးကကောင်းမွန်စွာထူထောင်အကျိုးဆက် (dendritic ကျောရိုး၏ induction ဖြစ်ပါသည်30, 31D1 MSNs များအတွက်ရွေးချယ်မည်အကြောင်း), တစ်ဦးတည်ဆောက်ပုံအပြောင်းအလဲ (32) နှင့်ΔFosBအပေါ်မှီခိုဖြစ်ပါတယ် (17, 18) ။ ယင်းတွေ့ရှိချက်ΔFosBအားဖြင့်ကျောရိုးဖွဲ့စည်းခြင်း၏စည်းမျဉ်း D1 MSNs မှတိကျတဲ့ဖြစ်နိုင်သည်အကြံပြုအပ်ပါသည်။ ဆဲလ်အမျိုးအစားသတ်သတ်မှတ်မှတ်နှင့်အတူချောင်းပရိုတိန်းဖော်ပြရရှိနိုင် mouse ကိုလိုင်းများဒီခေါင်းစဉ်ကိုဖြေရှင်းရန်, တိကျသောဆဲလ်အပေါ် dendritic ကျောရိုး၏ဖော်ထုတ်ခြင်းများအတွက်လုံလောက်သောမဟုတ်သောကြောင့်, ကျနော်တို့ (က Cre recombinase-မှီခိုထုံးစံ၌ mCherry ဖော်ပြတဲ့ထူးခြားတဲ့ HSV vector ကိုအသုံးပြုသင်္ဘောသဖန်း။ S2; SI နည်းလမ်းများ) Cre ဖော်ပြကြောင်း Transgene mouse ကိုလိုင်းများနှင့်အတူပေါင်းစပ်အထူးသ D1 သို့မဟုတ် D2 MSNs (ထဲမှာ5) ။ အဆိုပါ Cre-မှီခို HSV-mCherry နှင့် (တစ်ထိန်းချုပ်မှုအဖြစ်သို့မဟုတ် HSV-GFP) HSV-GFP-ΔFosBနှင့်အတူဤအကြွက်များ၏ NAc shell ကို Cotransducing ΔFosB D1 MSNs (D2 MSNs အတွက် dendritic ကျောရိုးသိပ်သည်းဆကိုတိုးပွားစေပေမယ့်မထင်ရှားသဖန်းသီး။ 4) ။ ဒီအတိုးအဓိကအား "နု" စဉ်းစားထားတဲ့ပေးသော Stubby နဲ့ဖြစ်ကောင်းပါးလွှာကျောရိုး, (၏ induction မောင်းနှင်နေသည်33) ။ ဆနျ့ကငျြ, ΔFosB overexpression ပိုပြီးရင့်ကျက်မှို-shaped dendritic ကျောရိုး၏သိပ်သည်းဆကိုမသက်ရောက်ခဲ့ရသည်။ NAc D1 MSNs အတွက်နု dendritic ကျောရိုးတွင်ဤΔFosB-သွေးဆောင်တိုး (အသံတိတ် synapses တစ်ခုတိုးလာအတွက်ΔFosBစကားရပ်ရလဒ်များအဆိုပြုချက်ကိုနှင့်အတူကောင်းစွာပတျသကျ27).
ΔFosBစကားရပ် D1 အတွက်နုကျောရိုးတိုးပွါးပေမယ် NAc MSNs D2 မဟုတ်ပါဘူး။ (Aထိန်းချုပ်မှုကနေကျောရိုး၏) နမူနာဓာတ်ပုံများကို (GFP) နှင့် FosB (+) D1 နှင့် D2 NAc MSNs ။ (B-Eတစ်ဦးချင်းစီ dendritic အပေါ်ΔFosBစကားရပ်၏သက်ရောက်မှု၏) အရေအတွက် ...
ရွေးချယ်၏ဆိုးကျိုးများ စွဲလမ်း-Related အပြုအမူအပေါ် NAc MSNs အတွက် FosB Expression ။
တိုတောင်း-အသုံးအနှုန်းများ၏ဆဲလ်အမျိုးအစား-တိကျတဲ့ရှိမရှိသက်ရောက်မှုဆုံးဖြတ်ရန် Synaptic ဂုဏ်သတ္တိများအပေါ် FosB overexpression စွဲ-related အပြုအမူတွေအပေါ်ဆဲလ်အမျိုးအစား-တိကျတဲ့သက်ရောက်မှုနှင့်အတူဆက်နွယ်နေပါသည်ကျနော်တို့ကာကွယ်တားဆီးဖို့ loxP က်ဘ်ဆိုက်များ (LS1) ကဝိုင်းရံရပ်တန့် codon ပါရှိသည်တစ်မူထူးခြားတဲ့ HSV vector နဲ့ပေါင်းပြီး, D2-Cre နှင့် D1-Cre ကြွက်တွေကိုအသုံးပြု Cre ဖော်ပြမထားဘူးဆိုဆဲလ်အတွင်းရှိပစ်မှတ်ဗီဇစကားရပ် (သင်္ဘောသဖန်း။ S3) ။ အရွယ်ရောက်ပြီးသူအထီး D1- နှင့် D2-Cre ကြွက်ဖြစ်စေ HSV-GFP-LS1- အတူ NAc နှစ်နိုင်ငံထိုးသွင်းခဲ့ကြ FosB သို့မဟုတ် HSV-GFP (ထိန်းချုပ်မှု), နှင့် Transgene စကားရပ်အကျယ်ချဲ့အခါအပြုအမူတွေကိုခွဲစိတ်ပြီးနောက်5ဃကျော်အကဲဖြတ်ခဲ့ကြသည်။ ၏ Overexpression အထူးသ D1 NAc MSNs အတွက် FosB အနိမ့် (3.75 / ကီလိုဂရမ် mg) နှင့်မြင့်မားသော (7.5 မီလီဂရမ် / ကီလိုဂရမ်) ကြိမ်နှစ်ဦးစလုံးမှာကင်းဖို့ locomotor ာင်းတစ်ခုတိုးအဖြစ်ကိုကင်း၏အောက်ပိုင်းထိုးဖို့ကနဦး locomotor တုံ့ပြန်မှု (တစ်ခုတိုးစေ၏သဖန်းသီး။5A နှင့် C) ။ မတူတာကတော့, D2 NAc MSNs အတွက် FosB overexpression (ကိုကင်းမှတိရိစ္ဆာန်များ '' locomotor တုံ့ပြန်မှုအပေါ်အဘယ်သူမျှမသက်ရောက်ခဲ့သဖန်းသီး။5B နှင့် D) ။ ကိုကင်း-conditioning ရာအရပျ preference ကို (CPP က) assayed သောအခါအလားတူရလာဒ်များရယူခဲ့ကြသည်။ HSV-GFP နှင့်အတူထိုးသွင်း D1- သို့မဟုတ် D2-Cre ကြွက် (အနိမ့်ထိုးမှာလေ့လာတွေ့ရှိခြင်းမရှိသိသာ preference ကိုအတူကင်းချင်းတိုးတက်ရေးပါတီ၏ပုံမှန်ထိုးမှီခိုပြသသဖန်းသီး။5E နှင့် F). ၏ Overexpression D1 MSNs အတွက် FosB အောက်ပိုင်းကိုကင်းထိုးမှာလေ့လာတွေ့ရှိအကျယ်ချဲ့တုံ့ပြန်မှု (နဲ့အတူသိသိသာသာတိုးမြှင့်ကင်း CPP ကသဖန်းသီး။ 5E), သော်လည်း D2 NAc MSNs အတွက် FosB စကားရပ် (ကိုကင်းဆုလာဘ်ကိုမသက်ရောက်ခဲ့သဖန်းသီး။ 5F) ။ ဤရလဒ်သည်ကွောငျးတငျပွ အဆိုပါ NAc အတွက် D1 MSNs အတွက်မဟုတ် D2 MSNs အတွက် FosB overexpression, ကိုကင်းရန်အမူအကျင့်တုံ့ပြန်မှုပိုကောင်းစေပါတယ်။
သင်္ဘောသဖန်း။5။
D1 အတွက်ΔFosB၏ expression သော်လည်းမ D2 NAc MSNs ကင်းရန်အမူအကျင့်တုံ့ပြန်မှုကိုအားပေးအားမြှောက်။ (A-D ကို) Locomotor ဆားတုံ့ပြန် (တြိဂံ) သို့မဟုတ်ကင်း (ရင်ပြင်) တစ်ဦးတည်း GFP (ဖွင့်) သို့မဟုတ် GFP ဖော်ပြတိရိစ္ဆာန်များအတွက်နေ့စဉ်တိုင်းတာခဲ့ FosB ...
ယခင်အလုပ်ကြောင့်ΔFosB၏မူးယစ်ဆေး-သွေးဆောင်သော induction ဖို့ဦးနှောက်ရဲ့ဆုလာဘ် circuitry ပြောင်းလဲမှုများနှင့်စွဲ-ဆက်စပ်အပြုအမူတွေ (အကြားခိုင်မာသော link ကိုအကြံပြုထားပါတယ်6) ။ ΔFosBထူးထူးခြားခြားတည်ငြိမ်ဖြစ်ပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်မူးယစ်ဆေးဝါးများမှနာတာရှည်ထိတွေ့မှုအားဖြင့်သွေးဆောင်သည်ကို ထောက်. , တစ်ဦးအကျိုးသက်ရောက်မှုအဖြစ်ကောင်းစွာလူ့စွဲတွင်တွေ့မြင် (18), အရှိဆုံးလေ့လာမှုများရေရှည်ΔFosBစကားရပ်ကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့အတွက်အာရုံကြောနဲ့အပြုအမူ adapter, ပုံမှန်အား 2-8 wk အပေါ်အာရုံစူးစိုက်ခဲ့ကြ (3, 6, 7).
မည်သို့ပင်ဆိုစေအလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများမှကနဦးထိတွေ့မှု (ΔFosB mRNA နှင့်ပရိုတိန်း induces3, 6, 34), မူးယစ်ဆေးအုပ်ချုပ်ရေးမှ NAc MSN ကို Synaptic ဂုဏ်သတ္တိများနှင့်နောက်ဆက်တွဲအမူအကျင့်တုံ့ပြန်မှုပေါ်မှာဤ induction ၏သေးသက်ရောက်မှုစူးစမ်းကြပြီမဟုတ်။ H ကိုမှီကျနော်တို့၏ရေတိုရေရှည်စကားရပ်ကြောင်းသက်သေအထောက်အထားများကိုတင်ပြ D1 MSNs နှိုင်းယှဉ် NAc D2 အတွက်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုလာသောအခါ FosB အလှနျကွဲပြားခြားနားသော Synaptic နှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာအကျိုးသက်ရောက်မှုများထုတ်လုပ်။ ငါဎအဆိုပါ NAc core နဲ့ shell ကိုနှစ်ဦးစလုံးအတွက် D1 MSNs, ΔFosB overexpression Synaptic AMPARs ၏ stoichiometry အတွက်ရှာဖွေ ထောက်လှမ်း. အပြောင်းအလဲများမရှိဘဲ AMPAR-mediated Synaptic ဂီယာအတွက်လျော့နည်းစေ၏။ NMDAR-mediated EPSCs လည်း GluN2B ပါဝင်သော Synaptic NMDARs ၏အချိုးအစားတစ်ခုတိုးအကြံပြုခြင်း, (core ကိုအာရုံခံအတွက်အလားတူလမ်းကြောင်းသစ်နှင့်အတူ) NAc shell ကိုအာရုံခံအတွက်တာရှညျခဲ့ကြ. excitatory synapses ဂုဏ်သတ္တိများတွင်ဤအပြောင်းအလဲများကိုအသုံးပြုပုံအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအတွက်ကရှင်းပြသည်နိုင်ပါသည် ဒါခေါ် postsynaptic အသံတိတ် synapses ၏အချိုးအစားတစ်ခုတိုးစေ FosB overexpression ။ ဒီအယူအဆ, 1 / CV ကို၏အချိုးအစားနှင့်ကိုက်ညီ2 1 / CV ကိုမှ NMDAR EPSCs ၏2 AMPAR EPSCs ၏တိုးပွားလာခဲ့သည် အဖြစ် FosB နုကျောရိုး၏သိပ်သည်းဆဖြစ်ခဲ့သည်။ မတူတာကတော့, D2 NAc MSNs အတွက် FosB overexpression AMPAR-mediated Synaptic အဆိုပါ NAc shell ကိုအတွက်ဂီယာပေမယ့်မ core ကိုတစ်ဦးဆွေမျိုးတိုးစေ၏။ တစ်ဦးက 1 / CV ကို2 ကျနော်တို့ NMDAR-mediated Synaptic ဂီယာတစ်ဦးဆွေမျိုးကျဆင်းခြင်းဖြစ်ပွားခဲ့သည်ထွက်မအုပ်စိုးလို့မရဘူးပေမယ့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ, အသံတိတ် synapses ၏အချိုးအစားအတွက်လျော့နည်းရန်, အစိတ်အပိုင်းအတွက်, ဒီကြောင့်ဖြစ်မည်အကြောင်းအကြံပြုထားသည်။
ကြောင့်ရေတိုရေရှည်ΔFosB overexpression ဖို့ NAc တွင်ဤဆဲလ်အမျိုးအစား-တိကျတဲ့ Synaptic အလိုက်သင့်ပြောင်းလဲနေထိုင်ရှိမရှိဆုံးဖြတ်ရန်မည်သည့်အမူအကျင့်အပြောင်းအလဲများနှင့်အတူပတျသကျ, ကျနော်တို့ကသက်ဆိုင်ရာသုံးပြီး D1 သို့မဟုတ် D2 NAc MSNs ဖြစ်စေရန်ΔFosBစကားရပ်ကန့်သတ်ရန်တစ်မူထူးခြားတဲ့နည်းလမ်းတီထွင် Cre ယာဉ်မောင်းလိုင်း။ ယခင်အလုပ်ကသရုပ်ပြသသည်ရေရှည် (> ၆ wk) အလွန်အမင်းအလွန်အကျွံထုတ်လွှတ်ခြင်းသည် D6 တိုက်ရိုက်လမ်းကြောင်းတွင်ရှိသော်လည်း D1 သွယ်ဝိုက်လမ်းကြောင်းဖြစ်သော NAc နှင့် dorsal striatum နှစ်မျိုးလုံးတွင် MSNs သည်ကိုကင်းအား locomotor sensitization တိုးမြှင့်စေခြင်း၊ မမြင့်မား, မူးယစ်ဆေးဝါးထိုး (7) ။ ဤတွင်ကျနော်တို့က NAc အတွက် D2 MSNs ရွေးချယ်တဲ့အနိမ့်ကိုကင်းထိုးနှင့်တစ်ဦးပိုမိုမြင့်မားထိုးဖို့ locomotor တုံ့ပြန်မှုတိုးချဲ့ာင်းတစ်ခုတိုးလာ locomotor တုံ့ပြန်မှု elicits D4 အတွက်ΔFosB overexpression သာ 1-2 ဃကြောင်းသော်လည်းမပြပါ။ S ကimilarly, D1 NAc MSNs ၌ဤကာလတိုΔFosB overexpression တစ်ဦးအောက်ပိုင်းကိုကင်းထိုးဖို့ကိုကင်း CPP ကတစ်ခုတိုးစေ၏။ ဤရလဒ်သည်နှုန်း se D1 NAc MSNs အတွက်ΔFosB၏အဆင့်ဆင့်အတွက်တိုးပိုပြီးလျှင်မြန်စွာယခင်ကမျှော်မှန်းသည်ထက်ကိုကင်းများ၏ locomotor-လုပ်ငန်းများနှင့်အကျိုးသက်ရောက်မှုတစ်ခုတိရိစ္ဆာန်ရဲ့ sensitivity ပိုကောင်းစေပါတယ်ကြောင်းဆန္ဒပြခဲ့ကြသည်။ ဤရလဒ်သည်လည်းမူးယစ်ဆေးမှကနဦးထိတွေ့မှုကြောင့်ဖြစ်ပွားΔFosB၏ induction ထပ်ခါတလဲလဲအုပ်ချုပ်ရေးမှတုံ့ပြန်မှုအတွက်ပေါ်ပေါက်သောနောက်ဆက်တွဲပြောင်းလဲမှုများကိုအထောက်အကူပြုစေမည်အကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။
ကြွက်များတွင်ယခင်အလုပ်နာတာရှည် noncontingent ကင်းအုပ်ချုပ်ရေး (1 ဃ) အနေဖြင့်ရေတိုရေရှည် (2-5 ဃ) ဆုတ်ခွာ (NAc MSNs ၌တိတ်ဆိတ်စွာနေ synapses ၏မျိုးဆက်ဖြစ်စေသောသရုပ်ပြ35) ။ ဤသည်ကိုကင်း-သွေးဆောင် Synaptic ပြုပြင်မွမ်းမံ (CREB တစ်ဦးကြီးစိုးအနုတ်လက္ခဏာပုံစံစကားရပ်အားဖြင့်ပိတ်ဆို့ထားသည်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတက်ကြွ CREB ၏စကားရပ်အားဖြင့် mimicked ဖြစ်ပါတယ်24), ကိုလည်း hippocampus ၌တိတ်ဆိတ်စွာနေ synapses induces ရာ (28) ။ ထို့အပွငျ NAc အတွက်အသံတိတ် synapses (အသံတိတ် synapses ၏ကင်းသော induction ကာကွယ်ပေးသည်ပိတ်ဆို့ရာ GluN2B ပါဝင်သော NMDARs, အဖြစ်ကိုကင်း-ရူးနှမ်း locomotor အကဲဆတ်ခြင်းကြီးမြတ်သောအချိုးအစားမဆံ့24, 35) ။ ကိုကင်းအုပ်ချုပ်ရေးပြင်းပြင်းထန်ထန် (ကြွက်တွေမှာΔFosB induces ဆိုတဲ့အချက်ကိုနဲ့ပေါင်းစပ်ဤနေရာတွင်သရုပ်ပြရေတိုရေရှည်ΔFosB overexpression ၏ Synaptic ဆိုးကျိုးများ7) တစ်ဦးကလာပ်စည်းအမျိုးအစား-တိကျတဲ့ထုံးစံ၌ဆိုသော်ငြားကင်းအုပ်ချုပ်ရေးလည်းကြွက်များတွင် NAc MSNs ၌တိတ်ဆိတ်စွာနေ synapses ထုတ်ပေးကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။ ဤအမူးယစ်ဆေး-သွေးဆောင် Synaptic အပြောင်းအလဲများထပ်မံလေ့လာမှုတောင်းမည်ဘို့နှစ်ခုလုံးကိုကူးယူအချက်များ၏ induction ပဲဖြစ်ဖြစ်လိုအပ်ပေသည်။ T ကသူလေ့လာရေးကြောင်း CREB နှင့် FosB NAc MSNs ၌တိတ်ဆိတ်စွာနေ synapses သွေးဆောင်နိုင်ပါတယ်နှစ်ဦးစလုံးသူတို့ဆန့်ကျင်ဘက်အမူအကျင့် phenotypes ဖျန်ဖြေကြောင်းသိသိသာသာအထောက်အထားများအလငျး၌စိတ်ဝင်စားဖွယ်ဖြစ်ပါသည်: သော်လည်းရေရှည် FosB ကင်းဆုလာဘ်ကိုအားပေးအားမြှောက်, CREB ဆန့်ကျင်ဘက်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုပြုပြင် (3, 6) ။ သို့သော်ရေတိုရေရှည် သွေးဆောင် bitransgenic ကြွက်တွေမှာ FosB overexpression (ကိုကင်းရဲ့အမူအကျင့်အပေါ်သက်ရောက်မှုများမှေးမှိန်နေသည်ပာု36), ရလဒ်များ၏အနိမ့်အဆင့်ဆင့်ကိုထင်ဟပ်စေခြင်းငှါ FosB ဤအချိန်မှတ်သို့မဟုတ်စကားရပ်၏တိုတောင်းကာလတိုက်ရိုက်အကျိုးဆက်များမှာသွေးဆောင်။ ဤနေရာတွင်တင်ပြတွေ့ရှိချက်များ HSV-mediated overexpression ၏မြင့်မားကြောင့်တိုတောင်းသောကာလကိုယခင်ဖြစ်နိုင်ခြေအကြံပြု D1 NAc MSNs အတွက် FosB, ရေရှည်စကားရပ်များကဲ့သို့ကင်း၏အမူအကျင့်အပေါ်သက်ရောက်မှုများမြှင့်တင်ရန်။ ရှင်းနေသည်မှာနောက်ထပ်အလုပ် CREB နှိုင်းယှဉ်၏ induction ၏ဝိရောဓိသက်ရောက်မှုကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်လိုအပ် အဆိုပါ NAc အတွက် FosB ။ တဦးတည်းရှင်းပြချက်ကြောင့်ကင်းသော induction, သူတို့ရဲ့လုပ်ရပ်များ၏ဆဲလ်အမျိုးအစားသတ်သတ်မှတ်မှတ်ဖြစ်နိုင်သည် CREB သော induction D1 နှင့် D1 MSNs အတွက်အဖြစ်အချို့သော GABAergic interneurons အတွက်အညီအမျှဖြစ်ပေါ်သော်လည်း FosB, D2 MSNs များအတွက်ရွေးချယ်ဖြစ်ပါသည် (3) ။ ဒါဟာအစ, ဤကူးယူအချက်များသူတို့ရဲ့ electrophysiological နှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာသက်ရောက်မှုသွေးဆောင်ရာမှတဆင့်မြောက်မြားစွာပစ်မှတ်မျိုးဗီဇကိုသိရှိနိုင်ဖို့အရေးပါဖြစ်လိမ့်မည်။
အဆိုပါ NAc အတော်ကြာအပြန်အလှန်ဆက်စပ်သောဆားကစ်အတွက်ကွဲပြားအခန်းကဏ္ဍနှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာအကျိုးရလဒ်များနှင့်အတူအများအပြားဆဲလ်အမျိုးအစားတစ်ပင်သောင်းပြောင်းထွေလာရောနှောရောနှောပါဝင်သောတစ်ဦးရှုပ်ထွေးသောဦးနှောက်ဒေသဖြစ်ပါသည် (1, 3) ။ ဤတွင်ကျနော်တို့ (သူတို့ NAc ၏အနာဂတ်အာရုံခံကြောင့်, သူတို့ရဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့ output ကိုတိုက်ရိုက်စွဲ-related အပြုအမူတွေကိုချိတ်ဆက်ထားပြီ, MSNs အပေါ်အထူးအာရုံစိုက်5, 37, 38), နှင့် NAc MSNs ပေါ်သို့ excitatory drive ကိုအတွက်အပြောင်းအလဲများကို (စွဲတူသောအမူအကျင့်မူမမှန်ခြင်းများဖြစ်ပေါ်39) ။ အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများအားဖြင့်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်အကွိမျမြားစှာပရိုတိန်း (NAc MSNs ၏ဇီဝကမ္မဗေဒပြောင်းလဲမှုများချိတ်ဆက်ပြီ4, 19, 40, 41) ။ တချို့ယခင်လေ့လာမှုများ (တိုက်ရိုက်နှင့်သွယ်ဝိုက်လမ်းကြောင်း MSNs အကြား Synaptic ကွဲပြားခြားနားမှုလေ့လာခဲ့ကြသော်လည်း2, 4) နှင့်အခြားသူများကိုကို (NAc shell ကိုနှင့် core ကိုငျဒသေအကြားကွဲပြားခြားနားမှုအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ခဲ့ကြ16), ပေးထားသောပရိုတိန်းနှစ်ဦးစလုံး NAc ငျဒသေရော MSN ကို Subtype ၏ဇီဝြဖစ်စဉ်ကိုယခင်ကပေးအပ်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပေအပေါ်သက်ရောက်မှုများမည်သို့ပြည့်စုံရုပ်ပုံလွှာ။ ယခုကြှနျုပျတို့၏ရေတိုရေရှည်စကားရပ်ကိုပြသ FosB ဆဲလ်အမျိုးအစား-တိကျတဲ့နှင့် NAc MSNs ၏ excitatory Synaptic ဂုဏ်သတ္တိများအပေါ်ဒေသ-တိကျတဲ့သက်ရောက်မှုရှိပြီးအထူးသ D1 NAc MSNs ၌ဤမော်လီကျူးခြယ်လှယ်ကိုကင်းရန်အမူအကျင့်တုံ့ပြန်မှုပိုကောင်းစေပါတယ်ကြောင်း။ နှစ်ဦးစလုံးငျဒသေတှငျအနှစျခုကလာပ်စည်းအမျိုးအစားတွေကိုဘုံပရိုတိန်းနှင့်အချက်ပြလမ်းကြောင်း share သေးအပြုအမူအပေါ်မတူကွဲပြားသက်ရောက်မှုရှိသည်ကြောင့်ဤရလဒ်များကိုအလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့အတွက် NAc အတွက်မော်လီကျူးများနှင့် circuit ကိုအလိုက်သင့်ပြောင်းလဲနေထိုင်တစ်ဦးပြည့်စုံနားလည်မှုပေးကာကနဦးခြေလှမ်းကိုတင်ပြ။ အနာဂတ်အလုပ်ကဤအကြားတိုက်ရိုက်ကြောင်းကျိုးဆက်စပ်ဆက်ဆံရေးမျိုးရှိ, မရှိ, ဤ Synaptic အပြောင်းအလဲများကိုဦးစားသည့် NAc သို့တိကျတဲ့သွင်းအားစုမှာပေါ်ပေါက်ခြင်းရှိမရှိသတ်မှတ်ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ် FosB-သွေးဆောင် Synaptic နှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာအပြောင်းအလဲများနှင့်သွေးဆောင်နှစ်ဦးစလုံး၏အလွဲသုံးစားမှုသို့မဟုတ်စိတ်ဖိစီးမှု၏မူးယစ်ဆေးဝါး, ၏အုပ်ချုပ်မှုရှိမရှိ FosB အလားတူ Synaptic နှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာအလိုက်သင့်ပြောင်းလဲနေထိုင်ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။
နည်းလမ်းအသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များအတွက်တွေ့ SI နည်းလမ်းများ.
Heterozygous ဘက်တီးရီးယားအတုခရိုမိုဆုန်း (BAC) အရွယ်ရောက်ပြီးသူ (8-12 wk) အထီးကြွက်တွေအားလုံးစမ်းသပ်ချက်တွင်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်နှင့်အစားအစာနှင့်အမရရှိနိုင်ပါသည်ရေနှင့်တစ်ဦး 12 / 12-ဇအလင်း / မှောင်မိုက်သံသရာအပေါ်နှစ်ခုလှောင်အိမ်နှုန်းမှငါးအုပ်စုများအတွက်အတူတကွသျောခဲ့ကြသည် ခပ်သိမ်းသောကာလ။ D1-tdTomato ကြွက်တွေကိုအသုံးပြု Electrophysiology လေ့လာမှုများ (C57 / Bl6 ပေါ်သို့ backcrossed21) ။ လေ့လာဆန်းစစ်အပြုအမူစမ်းသပ်ချက်များနှင့် dendritic ကျောရိုးအဘို့, အသက်အရွယ်-လိုက်ဖက်အုပ်စုများသို့ခွဲခြား D1- နှင့် D2-Cre ကြွက် (အသုံးပြုခဲ့ကြသည်5, 42) ။ အားလုံးစမ်းသပ်ချက်စတန်းဖို့ဒ်တက္ကသိုလ်နှင့်ဆေးပညာသိနာတောင်ပေါ်ကျောင်းတွင်အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာတိရိစ္ဆာန်စောင့်ရှောက်မှုနှင့်အသုံးပြုမှုကော်မတီများ (IACUC) ကထွက်သတ်မှတ်မူဝါဒများနှင့်အညီလုပ်ဆောင်ခဲ့ကြသည်။
ငါတို့သည်ဤစီမံချက်၏သင်တန်းတစ်လျှောက်လုံးအထောကျအကူမှတ်ချက်များများအတွက် Malenka နှင့် Nestler ဓာတ်ခွဲခန်းအဖွဲ့ဝင်များကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဤလုပ်ငန်းကို (အိတ်) ကိုမူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုထောက်ပံ့ရေး 1K99DA031699 နှင့် P01 DA008227 (EJN နှင့် RCM မှ) နှင့် (EJN မှ) အမျိုးသား Institute မှစိတ်ကျန်းမာရေး၏ Grant က R01 MH51399 အပေါ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အင်စတီကျုကထောက်ခံခဲ့သည်။
1 ။ Lüscherကို C, Malenka RC ။ စွဲလမ်းထဲမှာမူးယစ်ဆေး-evoked Synaptic plasticity: မော်လီကျူးအပြောင်းအလဲများကို မှစ. circuit ကိုပြုပြင်ဖို့။ အာရုံခံဆဲလျ။ 2011; 69 (4): 650-663 ။ [PubMed]
2 ။ Grueter BA, Rothwell PE, Malenka RC ။ Synaptic plasticity နှင့်စွဲလမ်းအတွက် striatal circuit ကို function ကိုပေါင်းစပ်။ Curr Opin Neurobiol ။ 2012; 22 (3): 545-551 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
3 ။ Robison AJ, Nestler EJ ။ မှတ်တမ်းနှင့်စွဲလမ်း၏ဗီဇလုပ်ငန်းထိန်းချုပ်မှုယန္တရား။ နတ်ဗြာ neuroscience ။ 2011; 12 (11): 623-637 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
4 ။ Grueter BA, Brasnjo, G, Malenka RC ။ Postsynaptic TRPV1 နျူကလီးယပ် accumbens အတွက်ဆဲလ်အမျိုးအစား-တိကျတဲ့ရေရှည်စိတ်ကျရောဂါအစပျိုးလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ နတ် neuroscience ။ 2010; 13 (12): 1519-1525 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
5 ။ et al Lobo MK ။ တူတဲ့ကင်းဆုလာဘ်၏ optogenetic ထိန်းချုပ်မှုအချက်ပြ BDNF ၏ဆဲလ်အမျိုးအစား-တိကျတဲ့အရှုံး။ သိပ္ပံ။ 2010; 330 (6002): 385-390 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
6 ။ Nestler EJ ။ ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း။ စွဲလမ်း၏မှတ်တမ်းယန္တရားများ: DeltaFosB ၏အခန်းကဏ္ဍ။ ဖီလိုဖြတ်ကျော် R ကို Soc Lond B ကို Biol သိပ္ပံ။ 2008; 363 (1507): 3245-3255 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
7 ။ et al Kelz ကို MB ။ ဦးနှောက်ထဲမှာကူးယူအချက် deltaFosB ၏ expression ကိုကင်းမှ sensitivity ကိုထိန်းချုပ်သည်။ သဘာဝ။ 1999; 401 (6750): 272-276 ။ [PubMed]
8 ။ et al Zachary V ကို။ မော်ဖင်းအကိုက်အရေးယူအတွက်နျူကလိယ accumbens အတွက် DeltaFosB များအတွက်မရှိမဖြစ်အခန်းကဏ္ဍ။ နတ် neuroscience ။ 2006;9(2): 205-211 ။ [PubMed]
9 ။ Colby CR, Whisler K ကို Steffen ကို C, Nestler EJ, ကိုယ်ပိုင် DW ။ DeltaFosB ၏ Striatal ဆဲလ်အမျိုးအစား-တိကျတဲ့ overexpression ကင်းဘို့မက်လုံးပေးပိုကောင်းစေပါတယ်။ J ကို neuroscience ။ 2003; 23 (6): 2488-2493 ။ [PubMed]
10 ။ Nikulina EM, Marchand je, Kream RM, Miczek Ka ။ ကိုကင်းရန်အမူအကျင့်ာင်းအကျဉ်းလူမှုရေးစိတ်ဖိစီးမှုဟာ murine brainstem အတွက် fos စကားရပ်ပြောင်းလဲမှုများဖြင့်လိုက်ပါသွားပြီးနောက်။ ဦးနှောက် Res ။ 1998; 810 (1-2): 200-210 ။ [PubMed]
11 ။ Miczek Ka, Nikulina အီး, Kream RM, Carter က, G, Espejo EF ။ အဆိုပါ PAG အတွက်က c-fos စကားရပ်: တစ်အကျဉ်းလူမှုရေးရှုံးနိမ့်စိတ်ဖိစီးမှုပြီးနောက်ကင်းရန်အမူအကျင့်ာင်း။ Psychopharmacology (Berl) 1999; 141 (3): 225-234 ။ [PubMed]
12 ။ Miczek Ka, Nikulina EM, Shimamoto တစ်ဦးက, Covington HE ။ , 3rd စက်လှေကားသို့မဟုတ်နှိမ်နင်းကင်းဆုလာဘ်, tegmental BDNF နှင့်ကြွက်များတွင်စဉ်ဆက်မပြတ်လူမှုရေးစိတ်ဖိစီးမှုနှိုင်းယှဉ် Episode ကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ accumbal dopamine ။ J ကို neuroscience ။ 2011; 31 (27): 9848-9857 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
13 ။ Covington သူ, 3rd, et al ။ စိတ်ဖိစီးမှုမှကင်း-သွေးဆောင်အားနည်းချက်အတွက်ဖိနှိပ် histone methylation တစ်အခန်းကဏ္ဍ။ အာရုံခံဆဲလျ။ 2011; 71 (4): 656-670 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
14 ။ Lim ကကယ်, Huang က KW, Grueter BA, Rothwell PE, Malenka RC ။ Anhedonia နျူကလိယ accumbens အတွက် MC4R-mediated Synaptic အလိုက်သင့်ပြောင်းလဲနေထိုင်လိုအပ်သည်။ သဘာဝ။ 2012; 487 (7406): 183-189 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
15 ။ et al Vialou V ကို။ ဦးနှောက်အကြိုးကိုဆားကစ်အတွက် DeltaFosB စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်လက္ခဏာတုံ့ပြန်မှုမှခံနိုင်ရည် mediates ။ နတ် neuroscience ။ 2010; 13 (6): 745-752 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
16 ။ Kourrich S ကိုသောမတ်စ် MJ ။ အလားတူအာရုံခံ, ဆန့်ကျင်ဘက်အလိုက်သင့်ပြောင်းလဲနေထိုင်: shell ကိုနှိုင်းယှဉ် accumbens core ကိုအတွက်ဂုဏ်သတ္တိများပစ်ခတ် Psychostimulant အတွေ့အကြုံကို differential ပြောင်းပြစ်ပါတယ်။ J ကို neuroscience ။ 2009; 29 (39): 12275-12283 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
17 ။ et al ဝင်္ငါ။ ကိုကင်း-သွေးဆောင် plasticity အတွက် histone methyltransferase G9a ၏မရှိမဖြစ်အခန်းကဏ္ဍ။ သိပ္ပံ။ 2010; 327 (5962): 213-216 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
18 ။ et al Robison AJ ။ နာတာရှည်ကင်းရန်အမူအကျင့်များနှင့်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုပတျသကျတဲ့အစာကျွေးခြင်း-ရှေ့ဆက်ကွင်းဆက်လိုအပ် နျူကလီးယပ်အတွက် FosB နှင့် CaMKII shell ကို accumbens ။ J ကို neuroscience ။ စာနယ်ဇင်းများတွင် 2013 ။
19 ။ et al dong Y ကို။ CREB နျူကလိယ accumbens အာရုံခံ၏စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ် modulates ။ နတ် neuroscience ။ 2006;9(4): 475-477 ။ [PubMed]
20 ။ Pulipparacharuvil S က, et al ။ ကိုကင်း Synaptic နှင့်အမူအကျင့် plasticity ထိန်းချုပ်ဖို့ MEF2 ထိန်းညှိ။ အာရုံခံဆဲလျ။ 2008; 59 (4): 621-633 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
21 ။ Shuen ဂျာ Chen က M ကို, gloss B က, အ Basal ganglia ၏တိုက်ရိုက်နှင့်သွယ်ဝိုက်လမ်းကြောင်းအတွက်အလတ်စား spiny အာရုံခံ၏တစ်ပြိုင်နက် visualization များအတွက် Calakos N. Drd1a-tdTomato BAC Transgene ကြွက်။ J ကို neuroscience ။ 2008; 28 (11): 2681-2685 ။ [PubMed]
22 ။ Kauer ဂျာ Malenka RC ။ Synaptic plasticity နှင့်စွဲလမ်း။ နတ်ဗြာ neuroscience ။ 2007; 8 (11): 844-858 ။ [PubMed]
23 ။ et al Conrad KL ။ accumbens GluR2-ချို့တဲ့ AMPA receptors ၏ဖွဲ့စည်းခြင်းကိုကင်းတဏှာ၏ပေါက်ဖွား mediates ။ သဘာဝ။ 2008; 454 (7200): 118-121 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
24 ။ et al ဘရောင်း TE ။ ကိုကင်း-သွေးဆောင် locomotor ာင်းတစ်ဦးကအသံတိတ် synapses-based ယန္တရား။ J ကို neuroscience ။ 2011; 31 (22): 8163-8174 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
25 ။ ဣဇာက်သည် JT, Nicole RA, Malenka RC ။ LTP ၏ဟူသောအသုံးအနှုနျးအတှကျအကျိုးသက်ရောက်မှု: အသံတိတ် synapses အဘို့သက်သေသာဓက။ အာရုံခံဆဲလျ။ 1995; 15 (2): 427-434 ။ [PubMed]
26 ။ Liao: D, Hessler NA, hippocampal အချပ်၏ CA1 ဒေသတွင်း၌တွဲဖက်မှု-သွေးဆောင် LTP စဉ်အတွင်း postsynaptically အသံတိတ် synapses ၏ Malinow R. Activation ။ သဘာဝ။ 1995; 375 (6530): 400-404 ။ [PubMed]
27 ။ Kerchner GA, Nicole RA ။ အသံတိတ် synapses နှင့် LTP များအတွက် postsynaptic ယန္တရား၏ပေါ်ပေါက်ရေး။ နတ်ဗြာ neuroscience ။ 2008;9(11): 813-825 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
28 ။ မာရီ H ကို, Morishita W က, ယု X ကို, Calakos N ကို, Malenka RC ။ CaMKIV နှင့် CREB ၏ Vivo စကားရပ်ထဲမှာစူးရှသောအားဖြင့်တိတ်ဆိတ် synapses ၏မျိုးဆက်။ အာရုံခံဆဲလျ။ 2005; 45 (5): 741-752 ။ [PubMed]
29 ။ Kullmann DM ။ hippocampal ပိရမစ်ကြီးဆဲလ်တွေအတွက် Dual-အစိတ်အပိုင်း EPSCs ၏ amplitude အတက်အကျ: ရေရှည်အလားအလာများအတွက်ဂယက်ရိုက်။ အာရုံခံဆဲလျ။ 1994; 12 (5): 1111-1120 ။ [PubMed]
30 ။ ရော်ဘင်ဆင် TE, အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများမှထိတွေ့မှုနှင့်ဆက်စပ် Kolb ခဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ plasticity ။ Neuropharmacology ။ 2004; 47 (ပျော့ပျောင်း 1): 33-46 ။ [PubMed]
31 ။ Russo SJ, et al ။ အဆိုပါစွဲ synapses: နျူကလိယ accumbens အတွက် Synaptic နှင့်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ plasticity ၏ယန္တရားများ။ ခေတ်ရေစီးကြောင်း neuroscience ။ 2010; 33 (6): 267-276 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
32 ။ et al Lee က KW ။ နျူကလိယ accumbens အတွက် D1 နှင့် D2 dopamine အဲဒီ receptor ပါဝင်သောအလတ်စား spiny အာရုံခံအတွက်ကင်း-သွေးဆောင် dendritic ကျောရိုးဖွဲ့စည်းခြင်း။ proc Natl Acad သိပ္ပံယူအက်စ်အေ။ 2006; 103 (9): 3399-3404 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
33 ။ Bourne ဖြစ်မှု, Harris က KM ။ hippocampal dendritic ကျောရိုးမှာဖွဲ့စည်းပုံနှင့် function ကိုဟန်ချက်ညီ။ Annu ဗြာ neuroscience ။ 2008; 31: 47-67 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
34 ။ Chen က J ကို, et al ။ electroconvulsive ဖမ်းဆီးရမိခြင်းနှင့်ကင်းကုသနေဖြင့်မြစ်ဝကျွန်းပေါ် FosB နှင့် FosB တူသောပရိုတိန်း၏စည်းမျဉ်း။ Mol Pharmacol ။ 1995; 48 (5): 880-889 ။ [PubMed]
35 ။ et al Huang က YH ။ Vivo ကိုကင်းအတွေ့အကြုံကိုခုနှစ်တွင်အသံတိတ် synapses ကိုထုတ်ပေးပါတယ်။ အာရုံခံဆဲလျ။ 2009; 63 (1): 40-47 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
36 ။ McClung, CA, Nestler EJ ။ CREB အားဖြင့်မျိုးရိုးဗီဇစကားရပ်များနှင့်ကင်းဆုလာဘ်၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် FosB ။ နတ် neuroscience ။ 2003; 11: 1208-1215 ။ [PubMed]
37 ။ Covington သူ, 3rd, et al ။ အဆိုပါ medial prefrontal cortex ၏ optogenetic ဆွ၏စိတ်မကျဆေး Antidepressants အကျိုးသက်ရောက်မှု။ J ကို neuroscience ။ 2010; 30 (48): 16082-16090 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
38 ။ Stefanik MT, et al ။ ကြွက်များတွင်ရှာကြံကင်း၏ Optogenetic တားစီး။ စှဲလမျးသူ Biol ။ 2013; 18 (1): 50-53 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
39 ။ Lobo MK, Nestler EJ, Covington HE ။ စိတ်ကျရောဂါ၏လေ့လာမှုမှာ optogenetics ၏, III ကိုအလားအလာ utility ကို။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2012; 71 (12): 1068-1074 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
40 ။ McCutcheon je, ဝမ်က X, Tseng KY, Wolf က ME, Marinelli အမ်ကယ်လ်ဆီယမ်-permeable AMPA receptors နျူကလိယရှိကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်မှုကနေအချိန်ကြာမြင့်စွာဆုတ်ခွာပြီးနောက် synapses accumbens ပေမယ်ကင်းအုပ်ချုပ်ခွင့် experimenter မဟုတ်ပါဘူး။ J ကို neuroscience ။ 2011; 31 (15): 5737-5743 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
41 ။ ကင်မ်ဂျေ, Park က BH, Lee က JH, ပန်းခြံ SK ကိုကင်မ် JH ။ ကိုကင်းဖို့ထပ်ခါထပ်ခါထိတွေ့မှုအားဖြင့်နျူကလိယ accumbens အတွက် cell အမျိုးအစား-တိကျတဲ့ပွောငျးလဲ။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2011; 69 (11): 1026-1034 ။ [PubMed]
42 ။ Gong က S, et al ။ ဘက်တီးရီးယားအတုခရိုမိုဆုန်းဆောက်လုပ်ရေးနှင့်အတူသီးခြားအာရုံခံဆဲလျလူဦးရေမှ Cre recombinase ပစ်မှတ်ထား။ J ကို neuroscience ။ 2007; 27 (37): 9817-9823 ။ [PubMed]